Dadka deegaanka Dhadhaab oo ka cabanaya hay'adaha gargaarka - BBC News Somali
Dadka deegaanka Dhadhaab oo ka cabanaya hay'adaha gargaarka
1 Disembar 2017
Muddaaharaadka ayaa socday tan iyo Khamiistii
Mudaaharaad ayaa ka dhacay deegaanka Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya oo dadka deeganka ay uga soo horjeedaan hay'adda arrimaha qaxootiga ee UNHCR iyo hay'adaha gargaarka oo la sheegay inay sameeyeen shaqaale dhimis.
Arrintan ayaa waxay saameyn ku yeelatay howlgalladii hay'adaha gagaarka ay ka fulin jireen xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo iminka ay ku nool yiihin ku dhowaad 250,000 oo qof.
Banaanbaxyadan waxaa wada dadka deeganka oo sheegay in dhimista shaqaalaha iyo qandaaraasyada ay saameyn weyn ku yeelatay noloshooda. Waxay ku eedeeyeen hay'adda qaxootiga UNHCR inay si gaar ah u bartilmaameedsatay dadka deegaanka ee la shaqeynayay. Hay'adda ayaa beenisay eedeymahaasi.
Boqolaal dadka deegaanka ah oo wata boorar ay ku qoran yihiin halkudhagyo ka dhan ah Qaramada Midoobay ayaa xiray waddooyinka iyagoo cuuryaamiyay hawlaha hay'adaha samafalka.
Image caption Dadka deegaanka ayaa ku mudaaharaaday dibedda xafiiska UNHCR ee Dhadhaab
Arrintan ayaa saameynta ugu badan ku yeelatay qaxootiga oo aan maanta helin raashinkii la siin jiray bishiiba mar.
Assadullah Nasrullah oo ah sarkaal ka tirsan hay'adda UNHCR ayaa haseyeeshee sheegay in hoos loo dhiigay maalgelinta hawlaha hay'adda UNHCR eee Dhadhaab ka dib markii ku dhawaad kala bar dadkii halkaa ku jiray ay dalkooda dib ugu laabteen.
''Waxaan hadda helna 30% dhaqaalihii aan heli jirnay 2011, marka sidaas darteed waxaan u baahannahay inaan xirno xafiisyo, 25 ka mid ah shaqaalaheena Dadhaab oo gaaraya 224 aan shaqadaka joojino marka la gaaro March 2017'', ayuu yiri Nasrullaah.